Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Seychelles » Seychelles fizahan-tany fizahantany dia namoaka sehatra dizitaly fizahan-tany vaovao
Nitarika ny indostria tamin'ny vanim-potoana niomerika, ny Seychelles fizahan-tany momba ny fizahan-tany dia namoaka sehatra nomerika fizahan-tany vaovao antsoina hoe "ParrAPI" ny Alatsinainy 12 aprily 2021, tao amin'ny Biraon'ny Mont Fleuri.
Seychelles fizahan-tany dia mamoaka marketing nomerika mahomby mba hahasarika orinasa an-tserasera bebe kokoa.
Ny sehatra vaovao dia manome fomba mahomby kokoa amin'ny fitantanana lisitra be dia be ary afaka manasongadina orinasa maro hafa.
Ny angon-drakitra momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany misy amin'ny fiteny maro miaraka amin'ny sary, horonan-tsary ary fampahalalana amin'izao fotoana izao amin'ny toerana afovoany.
Sehatra vaovao ho an'ny Fizahan-tany Seychelles, ParrAPI, dia hanampy ireo mpandraharaha fizahan-tany amin'ny sokajy 12 hanitatra ny fisehosehoana ary hanintona orinasa maro amin'ny Internet amin'ny marketing nomerika mahomby.
Miaraka amin'ny anarany sy ny sary famantarana azy avy amin'ny boloky mainty miteraka, ParrAPI dia manome vahaolana vaovao sy mahomby hanangonana, hijerena ary hizarana mombamomba ny fizahantany amin'ny Internet.